Chitatu, October 26, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Musi wa18, Google yakati ichatanga kuvanza mazwi akakosha anoshandiswa nevanhu vakapinda mumaakaundi eGoogle (Gmail, Youtube, Google+, nezvimwewo). Sezvineiwo, muzita re zvakavanzika, Google iri kungoita izvi nemhedzisiro yayo yekutsvaga. Mune maonero angu, iyo BS uye izvi zvinoita kunge chaizvo zvakaipa famba mubhuku rangu. Inguva yakawanda seGoogle inopedza kudzidzisa indasitiri yekutsvaga maitiro ekuratidza zvirimo zvirinani uye kuitora yakatarwa pamazwi akakosha, kuviga dhijitari data seizvi zvinoita kunge kunoshoreka.
Dai ivo vakasarudza kuvavanza pakutsvaga kwakabhadharwa pamwe nekuiswa kwemashambadziro ekubhadhara akabhadharwa, ndingabvuma. Google iri kuviga mazwi akakosha anoshandiswa pakati payo zvivakwa? Zvakanaka, kwete… izvo zvivakwa zvavo saka hazviverengi. Zviri kungoviga ivo kune chero munhu ane basa. Iyo infographic pazasi kubva Attachmedia, inotsanangura zvakanakira nekuipira kwekufamba.
Imwe katsamba pane izvi. Google inotarisira kuti izvi zvinokanganisa 10% yako analytics keyword mhedzisiro. Uye zvinoita sekunge zvichiri kugonesa kushandiswa kwemazwi akakosha mukati Google Search Console… Ikozvino.
12 Nzira dzekugadzira Zvemukati Zera
Gumiguru 30, 2011 na8: 13 PM
Damn, saka chii chatingaite seyeye SEO mubatsiri kana isu tisina data!
Gumiguru 30, 2011 na8: 57 PM
Mubvunzo wakanaka, Myindustry! Parizvino, unogona kuramba uchivimba neWebmasters… asi kugona kubatanidza madonhwe pakati peshoko chairo neshanduro hazvibviri… kungoita mukana wakapihwa. Kana shandisa subset yevashanyi vasina kupinda mukati.
MuImba Web Mhinduro
Ndira 31, 2012 na5: 15 PM
Iwe uchiri kukwanisa kushandisa chirongwa senge seomoz kuti uwane imwe yeiyi data uye pamwe Alexa.
Ndira 31, 2012 na5: 13 PM
Ah wow! Izvi zvinonyatsosveta. Ini ndanga ndichinetseka kuti sei ndaive nemamwe mazwi akakosha asina kupihwa kutsvaga kwangu kwehupenyu mune analytics. Izvi zvirokwazvo zvinopesana nekugadzira. Ini ndinonyatsoda dhayagiramu yakagadzirwa inobatsira vanhu kuti vanzwisise izvi zviri nani!